सार्स–कोभ २’ भाइरस चीनको वुहानस्थित वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीबाट बाहिरिएको आशंका | Kapilvastu times
सार्स–कोभ २’ भाइरस चीनको वुहानस्थित वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीबाट बाहिरिएको आशंका
कोभिड–१९ का कारण फैलिएको महामारीको उत्पतिका विषयमा पछिल्ला दिनमा भएका बहसले ‘सार्स–कोभ २’ भाइरस ल्याबबाट बाहिर निस्किँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको शंका गरेको पाइन्छ । ‘सार्स–कोभ २’ भाइरस चीनको वुहानस्थित वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीबाट बाहिरिएको आशंका गरिएको छ ।
उक्त ल्याब कोरोना भाइरस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने केन्द्र भएका कारण पनि भाइरस त्यही ल्याबबाट चुहिएको आशंका गरिएको हो । इन्स्टिच्युटमा संक्रामक रोग परीक्षण गर्ने धेरै ल्याब पनि रहेका छन् जसलाई ‘बायोसेफ्टी लेभल ४ (बीएसएल–४)’ ल्याब पनि भनिन्छ । ती ल्याबहरू उपचारको कुनै विधि अथवा भ्याक्सिन नभएका खतरनाक रोगसँग जुध्न बनाइएको हो ।
पछिल्लो विवादले बायोसेफ्टी, बायो सेक्युरेटीजस्ता विवाद पुनजागृत गरेको छ । यस्तै गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दा अथवा त्यस प्रकारको अनुसन्धान गर्न ल्याब सञ्चालनमा ल्याउँदा दिनुपर्ने आवश्यक सजगताका विषयमा पनि बहस छेडिएको छ ।
अहिले यी विवाद धुवीकृत हुनुका साथै राजनीतीकरण भए पनि यी मुद्दाको महत्वका विषयमा हामीले नजरअन्दाज भने गर्नु हुँदैन । भाइरस बाहिर चुहिनुमा ल्याबको कुनै भूमिका नभए पनि यस प्रकारका विषयमा अतिरिक्त सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाको ‘बायोसेफ्टी एशोसियसन्स (एबीएसए)’ को तथ्यांकका अनुसार सन् २००३ यता अनुसन्धान हुँदै गरेका भाइरस चुहावटका चार वटा घटना भएका छन् तर त्यसले कसैलाई पनि संक्रमित गरेको छैन । ल्याबले आफ्नो अनुसन्धान सुरक्षित र जिम्मेवार तरिकाले गरेको छ छैन भन्ने चिन्ता नयाँ होइन । यसको प्रासङ्गिकता चीनको ल्याबमा हालै गरिएको विस्तृत अध्ययनले झनै खुलासा गरेको छ ।
खुला स्रोत अनुसन्धानका आधारमा हामीले ‘ग्लोबलवायोल्याब्सडटओआरजी’ लाई एक अन्तक्र्रियात्मक वेबसाइटका रूपमा विश्वभरका ‘बीएसएल–४’ प्रयोगशालाहरूको सूची सङ्कलन गरेका छौँ । हाम्रो अनुसन्धानले विश्वभर करिब ६० वटा ‘बीएसएल–४’ ल्याब रहेको पुष्टि गरेको छ । जसमध्येमा केही निर्माणका क्रममा छन् भने केही योजनामा परेका छन् । यस्ता ल्याब विश्वमा २३ देशमा छन् जसमध्ये बेलायतमा मात्रै सातवटा रहेको पाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा बायोसेफ्टीको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा कुल ल्याबको तीन चौथाई शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । यसमध्यमा आधाभन्दा बढी सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा रहेका छन् । बाँकी विश्वविद्यालयमा र बायोडिफेन्समा संलग्न सरकारी संस्थामा रहेको पाइएको छ ।
यसका अलावा केही थोरै संख्यामा निजी हिसाबमा पनि ल्याव सञ्चालनमा रहेका छन् । यी ल्याब कसले सञ्चालन गर्छन् भन्ने विषय छाड्ने हो भने यसको प्रयोग अत्यधिक घातक अथवा संक्रमणयुक्त रोगको उपचारका लागि गरिएको पाइन्छ । अथवा यी रोगका विषयमा आफ्नो ज्ञान बढाउन काम गरिरहेका चिकित्सकले यसको प्रगोग गरेका छन् ।
यी ल्याब सुरक्षित, उत्तरदायी र जिम्मेवार हिसाबमा सञ्चालन गर्न सकिने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । ‘बीएसएल–४’ रहेका एक तिहाई देशले मात्रै बायोसेफ्टी र बायो सेक्युरिटीका क्षेत्रमा राम्रो अंक ल्याएका छन् । आणविक खतरा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने ग्लोबल हेल्थ सेक्यिुरिटी इन्डेक्सले गरेको एक अध्ययनअनुसार यस्तो अंक प्रदान गरिएको हो ।
उक्त अध्ययनमा बीएसएल ल्याव भएका देशमा ल्याब सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था छ अथवा छैन भन्ने आधारबाट अध्ययन गर्छ । हाम्रो अध्ययनले ‘बीएसएल–४’ ल्याब भएका तीन देशमा मात्रै सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिएको छ ।
‘बीएसएल–४’ ल्याब भएका अधिकांश देशसँग ‘गेन अफ फङ्सन’ सम्बन्धी नीति छैन । कोभिड १९ उत्पतिबारे भएको बहसको एक आधार यही हो । यसकारण पनि वुहान ल्याबबाट भाइरस चुहिएको हुनसक्ने विश्लेषण भएको पाइन्छ ।
‘बीएसएल–४’ ल्याब भएका अधिकांश देशसँग ‘गेन अफ फङ्सन’ सम्बन्धी कुनै नीति नै छैन । कोभिड १९ उत्पतिका सम्बन्धमा भएको बहसको एक आधार यही हो । यसै कारण पनि वुहान ल्याबबाट भाइरस चुहिएको हुनसक्ने धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । यदि हामीले अहिलेको यो भाइरस ‘गेन अफ फङसन’ को परीक्षण गलत हिसाबमा हुँदा भएको भन्ने नपत्याए पनि यस प्रकारका काम भविष्यमा महामारीको कारण हुन सक्दैन भन्ने आधार भने छैन ।
हामी धेरैभन्दा धेरै देशले महामारीको तयारी र प्रतिक्रियालाई मध्यनजर राख्दै यस प्रकारका ल्याबको निर्माण गरून् भन्ने चाहन्छौँ । यसका अतिरिक्त ‘गेन अफ फङ्सन’ अनुसन्धान विधिबाट वैज्ञानिकहरूले भाइरसका विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न सक्छन् । यस्तै, यो जनवारबाट मानिसमा संक्रमण हुन सक्ने खतरा अथवा मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्ने खतरा कति हुन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी हासिल गर्न सहयोगी सिद्ध हुन्छ ।
यो खतरनाक रोगसँग लड्न, सुरक्षा र सुरक्षा जोखिम दूर गर्न, उच्च राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक स्थापित गर्न तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यसको शुरूवातका लागि उत्तम स्थान भनेको ‘बीएसएल–४’ ल्याब र अन्य ल्याब हो जसले खतरनाक रोगका विषयमा अनुसन्धान गर्छन् ।
यसले हालै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आईएसओ ३५००१ अनुसार विकास गरिएको बायो खतरा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । यो मापदण्डका लागि कुनै महँगो हार्डवेयरको जडान गर्नु आवश्यक हुँदैन । यसका लागि सेफ्टी र सेक्युरिटी रिक्स व्यवस्थापन गर्न विकास गरिएको पद्धतिले काम गर्छ । यो हाम्रो पहुँचमा रहेको मापदण्ड हो जसका विषयमा पहिला नै छलफल भइसकेको छ । यो छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
राष्ट्रियस्तरमा ‘बीएसएल–४’ ल्याब भएका देशका सरकारले बहुआयामिक हिसाबमा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अनुसन्धानको सुरक्षा लगायतमा विषयमा जोड दिँदै त्यसले पु¥याउन सक्ने सम्भावित क्षतिका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै ती देशले बायोलोजिकल हतियार सम्बन्धी अभिसन्धि जसका उनीहरू पक्ष राष्ट्र छन् त्यसलाई आफ्नो अनुसन्धानका विषयमा लगातार जानकारी दिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हामी यस्ता संरचना व्यवस्थित गर्दै अधिकतम नियन्त्रण सुविधाको निगरानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छौँ । यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । अमेरिकी र रसियाली ल्याबमा उत्पादन हुने दादुरा भ्याक्सिनकको बायोसेफ्टी र बायोसेक्युरिटीलाई प्रदान गरेको जस्तै सजगता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।
यसको अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निरन्तरङ्गपमा बायो रिक्स सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूहबाट समीक्षा गराउनुपर्छ जसमा सरकारी अधिकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका विशेषज्ञ सम्मिलित हुन्छन् । अर्को विकल्प भनेको बायोसेफ्टी र बायोसेक्युरिटीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको संख्या थप्नुपर्छ ।
अधिकतम नियन्त्रण प्रयोगशालाको निगरानी गर्ने संरचनाका अलावा अनुसन्धानको दोहोरो उपयोग, सम्भावित महामारीबाट बाच्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त दिशानिर्देश विकास गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आवश्यकता हुन्छ ।
कोभिड–१९ हाम्रो भूमण्डलीकृत र आधुनिक विश्वको कमजोरीका विषयमा एक प्रकारको संकेत थियो । अब आउन सक्ने महामारीबाट बच्ने उपायका विषयमा सोच्ने सबै देशको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । यस्तै खतरनाक रोगका विषयमासुरक्षित रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने रणनीति विकास गर्नुपर्छ ।
(डा. ग्रेगरी डी कोब्लेट्ज जर्ज मेसन विश्वविद्यालयमा बायोडिफेन्स ग्य्राजुएट कार्यक्रमका एसोसिएट प्राध्यापक र निर्देशक हुन् । डा. फिलिपा लेन्टजोस विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाकी लेक्चरर र लन्डन किङ्स कलेज अन्तर्गत विज्ञान र सुरक्षा केन्द्रकी निर्देशक हुन् । १५ जुन २०२१ मा द गार्जियनमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)